Incwadi entsha kaMartin Vrijland 'Okungokoqobo njengoba sikubona' kulungele ukulethwa! : UMartin Vrijland
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-4 November 2019	• 3 Amazwana
Isikhathi sesifikile ekugcineni sencwadi entsha ethi 'Iqiniso njengoba silibona'. Izolo ngivele nginikeze abafundi incwadi ye-Ebook Reader (noma i-e-Reader uma ufuna) nangenguqulo ye-PDF. Kusukela manje inguqulo yencwadi ephepheni iyatholakala nge-webshop boekbestellen.nl ngentengo ye- € 24,95. Ngezansi usengaba yilungu futhi uthole inguquko ye-e-umfundi futhi ufunde inguqulo ye-PDF. Awunayo i-Ebook Reader? Ngemuva kwalokho kuma-PC amaningi, ama-laptops noma ama-i-pads ungahlala ufunda le nguqulo ye-Ebook Reader. Ukuqiniseka nje, ngifaka nenguqulo ye-PDF ukuze uyifunde online kwi-device yakho oyithandayo. Lokho kungenzeka futhi kwi-i-Pad yakho noma ngocingo.
Incwadi inikeza isifinyezo esihle seqiniso elingamanga kanye ne-Truman Show ehlanganisiwe lapho ubuntu bubanjwa khona ngohlelo kusuka ekubelekeni kuye ethuneni. Incwadi ihlinzeka ngokuningiliziwe okuningiliziwe, kepha ngaphezu kwakho konke kuza nesixazululo esicacile.
Wonke umuntu ubhekana nezinhlobo zokuhlelela kusuka ebuntanjeni kuya ethuneni. Le ncwadi ikhombisa ukuthi lolu hlelo luhlelwe kanjani, ukuthi izakhiwo zamandla zakhiwa kanjani emhlabeni nokuthi ubuntu benziwa kanjani ku-Truman Show ehlanganisiwe (ngemuva kwefilimu enegama elifanayo elivela ku-1998) ekusebenzisaneni phakathi kwabezindaba, kwezepolitiki kanye nokuphikiswa okulawulwayo. Ichaza okungokoqobo njengoba sikubona kusuka kumodeli yokulinganisa yokulinganisa ngokusekelwe 'ekuhlolweni kwe-slits ephindwe kabili', i-quantum physics kanye nombono wokwazi. Kumele kube yinoma ngubani obandakanyeka ukwazi, inkolo, ingokomoya kanye nepolitiki.
Inhloso yami bekungukubhala incwadi engafundwa ngokomthetho ngosuku olulodwa futhi ongayinika umndeni noma abangane ukubenza bacabange. Siphumelele. Incwadi iqukethe amakhasi we-148 ngakho-ke kulula ukuyifunda ngosuku.
Uma usuvele uyilungu lonyaka futhi ufuna ukuthola le ncwadi ngohlobo lwephepha, ngicela ungithumele i-imeyili ngekheli lakho.
Ngezansi ungalanda uhlobo lwe-Ebook Reader noma ufunde inguqulo ye-PDF. Ungawafinyelela womabili amafayela ngemuva kokuba yilungu. Ukufinyelela kunikezwe igolide nabo bonke ubulungu bonyaka. Kulawo malungu kuphela izixhumanisi zencwadi ezansi kwalesi sihloko ziyabonakala. Abanye babona inkinobho yobulungu. Lapho uba yilungu, empeleni ubhalisa njengomxhasi, ongisekela ngalo ukuze ngiqhubeke nomsebenzi wami. Ngiyabonga kakhulu ngalokho!
Vuselela i-5 ngo-Novemba 2019, i-15: isikhathi se-30: manje usunga-oda i-e-umfundi version ne-PDF nge-webshop ngaphansi kwenkinobho eluhlaza okwesibhakabhaka.
Uma, ngokwesibonelo, uxhase ngokudluliselwa kwebhange lesikhathi noma ubulungu benyanga ngenyanga futhi ufuna ukukwazi ukufunda incwadi, sicela usithinte ngefomu lokuxhumana. Isizathu sokuthi ngibeke lo mkhawulo yingoba abantu bangafunda incwadi yami nge-X 2 ngokuqala ngokuba yilungu lenyanga bese bekhansela ubulungu futhi.
Amathegi: incwadi, de, die, afakiwe, kennen, Martin, izwe elikhululekile, okungokoqobo, thina, ezifana
5 November 2019 ku-21: 12
Ngalesi sikhathi ngithanda ukukuhalalisela ngokukhuthazela nokuzibophezela kwakho egameni elizimele
ukuthi uyenze ukuba ifinyeleleke kuwo wonke umuntu osencwadini yebhuku.
Ngokubona kwami, udinga isimo sengqondo esiqinile namandla amakhulu okululama
Abantu abahlukumezekile abahlukumezekile ukukhombisa ukuthi bahlukunyezwa kangakanani futhi bakhohlisiwe
amandla okukhanuka kuleli nakwenye indawo.
futhi ukuhalalisela ngencwadi yakho
6 November 2019 ku-15: 09
Angizenzanga zonke lezo zinhlupho zeminyaka ye-7 yokunamathela intamo yami futhi amaqanda anomoya ngokuqinisekile awangibeka kimi. Ngokuphambene nalokho ... lokho kungibize kakhulu.
Angizibhalele le ncwadi, kodwa ngokufanele futhi yibo bonke labo bantu abangathanda ukuthola okuthile abazokunikeza labo abaziyo ngesimo esikuso.
6 November 2019 ku-15: 46
Sawubona Martin, usuyiyalile incwadi yakho entsha.
Halala futhi uqhubeke ngolwazi! Kuyadingeka nje.
« Izikhungo zentsha zizwakala zinomsindo ngokuhlukumezeka ngoba 'ukunakekelwa' empeleni kuhlukunyezwa?
I-Adobe, i-Twitter kanye nabezindaba ezihamba phambili bazolwa nezimpi ezijulile? »
Ukuvakashelwa okuphelele: 13.856.870
Kungani ufuna ukwazi lokhu? op Ngabe sekuqalile ukuhlaselwa? I-Psycholance yayivele inikezwe ukukhanya okuluhlaza ku-2018 ngokususelwa ecaleni le-Els Borst / Bart van U.